HomeChampions LeagueAncelotti Oo Hiil Xummad Jebin Ah U Noqday Guardiola
Waxa uu la kulmay toddobaad dhaleecayn badan loo jeediyey qaab ciyaareedka kooxdiisa kadib guul darro aanay ku farxin taageereyaasha iyo maamulku, laakiin wuxuu kasbaday in difaac uu ka helo macallinkii uu loolanka la galay.
Tababaraha kooxda Real Madrid, Carlo Ancelotti ayaa hiil u noqday macallinka kooxda Bayern Munich, Pep Guardiola, waxaanu sheegay in khibradda iyo hannaanka ciyaareed ee ay muujisay kooxda Bayern Munich intii uu laylinayay Pep ay tahay mid soo jiidatay indhihiisa oo uu la dhacay, khaasatan kulankii ay Real Madrid ku badisay 1-0.
Tababare Pep ayaa mar hore jeebadda gashaday horyaalnimada wadanka Jarmalka, waxase uu canaan ku kasbaday guul darrada ka soo gaadhay kulankii Real Madrid.
“Waxaan jecelahay qaabka uu u ciyaaro Guardiola. Waxa uu soo bandhigaa fikrado cusub iyo hannaan cad oo kubadda cagta loo ciyaaro, waxa uu leeyahay hannaan isaga u gaar ah” ayuu yidhi Ancelotti, waxaanu intaa ku daray “Aad ayaan u jecelahay hannaanka Pep, fikrado cusub ayuu ku soo daray kubadda cagta, wuxuu qaab cusub u abuuray Barca oo uu haddana ku samaynayo Bayern inkasta oo ay jirto xoogaa caqabado ah.
Kooxdu waxay leedahay qaabka macallinkooda. Wax wanaagsan ayuu qabanayaa, laakiin annagu (Real Madrid) wali diiradda ma saarayno kulanka Munich. Kulanka berri ayaa muhiim noo ah oo ka soo horreeya” ayuu yidhi.
Ancelotti waxa uu ka mid yahay raxan magacyo tababareyaal ah oo lala xidhiidhiyey inay qabanayaan shaqada ka bannaanaatay Manchester United oo iska eriday tababaraheedii David Moyes, laakiin wuxuu macallinkan hore u soo layliyey Chelsea ku nuux-nuuxsaday in aanu maanka gelinin inuu ka tago Santiago Bernabeu.
“Tan oo kale sannad walba way dhacdaa, waxaanan idhaahdaa uun si isku mid ah. Halkan ayaan ku faraxsanahay: Nasiib ayaan leeyahay inaan la joogo kooxda ugu weyn adduunka. Waan ixtiraamaa Man United iyo waxa ku dhacay Moyes, laakiin halkan ayaan ahaanayaa” ayuu yidhi.
Ancelotti waxa uu kooxdiisa u hoggaamin doona wadanka Jarmalka, iyadoo ay kooxda reeer Madrid garoonka Allianz Arena Salaasada kula kulmi doonto Bayern Munich, laakiin waxa uga soo horreysa kulanka Sabtida oo ay Osasuna la ciyaari doonaan.
Jose Mourinho Oo Sheegay in aanu Mar Labaad ku noqonayn Kooxda Real Madrid
31/12/2015 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Arjen Robben: ma qoomamaynaayon 2010, wax weyn ayaanu qabanay